Booliska Koonfur Afrika iyo kooxo burcad ah oo dil iyo dhac u geystay muwaadiniin Soomaaliyeed |
Booliska Koonfur Afrika iyo kooxo burcad ah oo dil iyo dhac u geystay muwaadiniin Soomaaliyeed
Pretoria-Dalka Koonfur Afrika waxaa la sheegay in ganacsade Soomaaliyeed uu u geeriyooday jir-dil ay u geysteen ciidamada booliska dalkaas, kaas oo dhaawacyo daran uu kasoo gaaray, balse markii dambe uu u dhintay.
Halka ay ciidamadu ku jir-dileen, kadibna uu ku dhintay muwaadinkaas Soomaaliyeed waa magaalada Pretoria, waxayna ugu tageen sida la sheegay goobtiisa ganacsi.
Marxuumka waxaa magaciisa lagu soo koobay Maxamed, waxaana la sheegay in sababta ay boolisku u jir dileen ay tahay, in uusan u hoggaansamin bandowgii lagu soo rogay magaalada, kaas oo ay dowladdu saartay si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19, oo si daran ugu faafay dalkaas.
Isla dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Cape Town, waxaa goobtooda ganacsi lagu weeraray ganacsato kale oo Soomaaliyeed, kuwaas oo la bililiqeystay dukaamadoodii, halka lasoo sheegayo in iyagiina dhaawacyo loogeystay, kadib markii ay weerareen koox burcad Koonfur Afrikan ah.
Soomaalida ku nool daka Koonfur Afrika ayaa si joogtoah ula kulma dil iyo dhac joogto ah, waxaana u geysta kooxo burcad ah oo dalkaas aad ugu badan.